အာဆီယံ ကစားသမား ခေါ်ယူမှုတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလာတဲ့ ထိုင်းနဲ့ မလေးရှား လိဂ် - Yangon Media Group
အာဆီယံ ကစားသမား ခေါ်ယူမှုတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလာတဲ့ ထိုင်းနဲ့ မလေးရှား လိဂ်
အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၁ နိုင်ငံရှိကြပြီး သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် ပြည်တွင်းလိဂ်ပြိုင်ပွဲ တွေ ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ လာမယ့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ကတော့ အာဆီယံကလပ်အသင်းတွေ ရဲ့ အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို မြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။ အကြောင်းကတော့ ထိုင်းနဲ့ မလေးရှားလိဂ်တွေရဲ့ နိုင်ငံခြားသားကစားသမား ခေါ်ယူမှုမှာ အာဆီယံကစားသမားတစ်ဦး ခေါ်ယူနိုင်တဲ့ စည်းမျဉ်းရေးဆွဲလိုက်တာ ကြောင့်ပါ။ ဒါဟာ ထိုင်းနဲ့ မလေးရှားလိဂ် အဖွဲ့ချုပ်တွေရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုလို့လည်းဆိုနိုင် ပြီး ဘယ်လိဂ်က အာဆီယံဘောလုံးပရိသတ် တွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု အများဆုံး ရယူနိုင်မလဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ လက်ရှိလိဂ်အဆင့် သတ်မှတ်မှု အဆင့်အရတော့ ထိုင်းလိဂ်က အာရှအဆင့် ၁၂ မှာရှိပြီး မလေးရှား စူပါ လိဂ်က အဆင့် ၁၇ မှာ ရပ်တည်နေလို့ ထိုင်းလိဂ်က အာဆီယံဒေသတွင်းမှာ အဆင့် အမြင့်ဆုံးလိဂ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ထိုင်းလိဂ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၇ ဘောလုံး ရာသီက နိုင်ငံခြားသားကစားသမား ငါးဦး ခေါ်ယူခွင့်ရှိပြီး တစ်ဦးက အာရှဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံက ကစားသမား ဖြစ်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပြီး ကွင်းထဲမှာ အာရှကစားသမားတစ်ဦးနဲ့ အခြားကစားသမား သုံးဦး စုစုပေါင်း လေးဦးပဲ တစ်ပြိုင်နက်ထည့်ကစားခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ် ဘောလုံးရာသီမှာတော့ နိုင်ငံခြားသား ကစားသမား ငါးဦးဆက်ပြီးခေါ်ယူခွင့်ရှိ ပေမယ့် အာဆီယံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်လက် အောက်ရှိ နိုင်ငံက ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ရမယ်လို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် ထိုင်း T-1 လိဂ်မှာ အာဆီယံကစားသမားတွေ မြင်တွေ့ရဖို့ရှိလာတာပါ။ လက် ရှိအပြောင်းအရွှေ့မှာ ထိုင်းကလပ်တွေဖြစ်တဲ့ ပတ္တယားယူနိုက်တက်နဲ့ Police Tero အသင်းတို့က အာဆီယံကစားသမားတွေ ခေါ်ယူပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပတ္တယားအသင်းက ဖိလစ်ပိုင်က ဂျပန်နွာဖွား မီနီဂီရှီကို ခေါ် ယူထားတာဖြစ်ပြီး Police Tero အသင်းက ရတနာပုံက မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အောင်သူကို တစ်ရာသီအငှားနဲ့ ခေါ်ယူထားတာပါ။ထိုင်းလိဂ်ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်ကနေ လာမယ့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်အထိ သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် တခြားအာဆီယံကစားသမားတွေလည်း ထိုင်းလိဂ်ကိုရောက်လာဖို့ ရှိပါသေးတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ထိုင်းက လပ်ချင်းရိုင်အသင်းက ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူး ကျော်ကိုကိုနဲ့ အကြိုသဘောတူညီမှု ရယူထားတာကြောင့် လာမယ့်တစ် ပတ်အတွင်းမှာ အပြီးသတ်စာချုပ်ချုပ်ဆို ဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ထွက် ပေါ်နေတဲ့ သတင်းတွေအရ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ လာအို၊ စင်ကာပူနိုင်ငံက ကစားသမားတွေနဲ့လည်း ချိတ်ဆက်နေပါတယ်။
ဒေသတွင်း အဆင့်အမြင့်ဆုံးလိဂ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ ထိုင်းလိဂ်ကို ယှဉ်ဖို့အတွက် မလေးရှားလိဂ်ကလည်း အာဆီယံကစားသမားခေါ် ယူမှုကို သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံလက် ရွေးစင်အသင်းအတွက် ပွဲ ၃ဝ ကစားထားတဲ့ အာဆီယံကစားသမားတွေကိုပဲ အဓိကထား ခေါ်ယူရမှာဖြစ်ပြီး လက်ရွေးစင်ပွဲ ၃ဝ မပြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ မလေးလိဂ်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ထောက်ခံမှုနဲ့ ခေါ်ယူရမယ်လို့ စည်း မျဉ်းသတ်မှတ်လိုက်တာပါ။ လက်ရှိအပြောင်း အရွှေ့မှာ မလေးရှားလိဂ်က အလှုပ်ခတ်ဆုံး ဖြစ်နေပြီး ကမ္ဘောဒီးယားလက်ရွေးစင် သုံးဦး၊ စင်ကာပူကစားသမား သုံးဦးနဲ့ အင်ဒိုနီးရှား ကစားသမား နှစ်ဦးကို ခေါ်ယူထားတာပါ။ မလေးရှားကလပ် ပါဟန်းအသင်းက ဂျေလိဂ်-၃ မှာ သွားရောက်ကစားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားတိုက်စစ်မှူး ချန်ဗန်သန်နကာ ကို ခေါ်ယူခဲ့သလို စင်ကာပူ လက်ရွေးစင် ဘဟာရူဒင်ကိုလည်း ခေါ်ယူထားပါတယ်။ ကမ္ဘောဒီးယားကစားသမားတွေထဲမှာ တောင်ပံကစားသမား စုမ်ဖန်က PKN အသင်းမှာ ကစားမှာဖြစ်သလို ကွင်းလယ်ကစား သမား သီယာရီဘင်ကလည်း တီရန်ဂါနူးအသင်းမှာ ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား ကစားသမားနှစ်ဦးကတော့ ကွင်းလယ်ကစားသမား အီဗန်ဒီမက်စ်နဲ့ တောင်ပံကစားသမား အာမိုင်ယန်တို့ဖြစ်ပြီး ဆီလန်ဂါအသင်းကပဲ နှစ်ဦးစလုံးကို ခေါ်ယူထားတာပါ။ မလေးရှားထိပ်သီးကလပ် ဂျိုဟိုးလ်ဒါရူးက စင်ကာပူ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဟာရစ်ဟာရမ်ကို ခေါ်ယူထားသလို နီဂါရီအသင်းကလည်း စင်ကာပူက မို့ခ်ျဟာနာကို ခေါ်ယူထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိအချိန်အထိ တော့ မလေးရှားစူပါလိဂ်က အာဆီယံကစားသမား ရှစ်ဦးအထိ ခေါ်ယူထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မလေးရှားစူပါလိဂ်ကို ကလပ်အသင်း ၁၂ သင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားနေတာဖြစ်လို့ အာဆီယံကစားသမား ခေါ်ယူခြင်းမရှိသေးတဲ့ တခြားခြောက်သင်းမှာလည်း တခြား အာဆီယံကစားသမားတွေ ထပ်ရောက်လာဖို့ ရှိပါသေးတယ်။
အာဆီယံဒေသတွင်းမှာ ထိုင်းနဲ့ ဗီယက်နမ်အသင်းတွေက ဈေးကွက်အရနဲ့ ပရိသတ် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစေဖို့အတွက် အာဆီယံကစားသမား ခေါ်ယူရမယ့် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်လိုက်ပေမယ့် တခြားလိဂ်တွေကတော့ အ ပြောင်းအလဲမရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ထိုင်းလိဂ်ပြီးရင် ဒုတိယအဆင့် အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဗီယက်နမ်လိဂ်ကတော့ အာဆီယံကစားသမား ခေါ်ယူမှုမရှိသလို ဗီယက်နမ် ကစားသမားတွေဟာလည်း ထိုင်းနဲ့ မလေးရှားလိဂ်မှာ သွားရောက်ကစားမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေတောင် ထွက်ပေါ်လာခြင်း မရှိသေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဗီယက်နမ် V-League-1 မှာ အသင်းစုစုပေါင်း ၁၄ သင်း ပါဝင်ပြီး နိုင်ငံခြားသား ကစားသမား လေးဦးပဲ ခေါ်ယူခွင့်ပြုထားပြီး တစ်ဦးက အာရှကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာပါ။ ဗီယက်နမ် ကစားသမားတွေထဲမှာ အရည်အသွေးရှိတဲ့ ကစားသမားတွေရှိပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက တောင်ကို ရီးယား လိဂ်-၁ ကလပ် ဂေါင်ဝမ်နဲ့ ဂျပန်လိဂ်-၂ ကလပ် မီတိုဟိုလီဟော့အသင်းမှာ တစ်ရာသီအငှားစာချုပ်တွေနဲ့ သွားရောက် ကစားခဲ့ကြပေမယ့် လာမယ့်ဘောလုံးရာသီ အတွက်တော့ ပြည်တွင်းက မိခင်ကလပ် တွေမှာပဲ ပြန်ကစားရဖို့ ရှိပါတယ်။
ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှု ပိုမိုကျဆင်းလာတဲ့ မြန်မာလိဂ်
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ပြိုင်ပွဲကတော့ လာမယ့်ဘောလုံးရာသီမှာ အရင်နှစ်တွေ ကထက်တောင် ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှု လျော့ ကျနေပါတယ်။ ကလပ်အသင်းအများစုက ငွေကြေးချိုးခြံချွေတာဖို့ အာရုံစိုက်နေကြသလို တချို့ကလည်း နိုင်ငံခြားသား ကစားသမား မခေါ်ယူဘဲ ပြည်တွင်းကစားသမား တွေနဲ့ပဲ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့လည်း ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်က ဗီယက်နမ်လိဂ်လိုပဲ နိုင်ငံခြားသားကစားသမား လေးဦးပဲ ခေါ် ယူခွင့်ပြုထားပြီး တစ်ဦးက အာရှကစားသမား ဖြစ်ရမှာပါ။ နိုင်ငံခြားသား ကစားသမားလေးဦး ခေါ်ယူခွင့်ရှိပေမယ့် ပြည် တွင်းပြိုင်ပွဲမှာတော့ သုံးဦးပဲ တစ်ပြိုင်နက် ကစားခွင့်ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမားနှစ်ဦး လို့ ဆိုနိုင်တဲ့ အောင်သူနဲ့ ကျော်ကိုကိုက ထိုင်းလိဂ်မှာ သွားရောက်ကစားဖို့ရှိနေတာက ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုကို ပိုမိုလျော့ကျ လာဖွယ်ရှိပါတယ်။ ကျော်ကိုကိုရဲ့အပြောင်း အရွှေ့က စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာ မဟုတ် သေးပေမယ့် ရန်ကုန်အသင်းဘက်က တစ်ရာသီ အငှားနဲ့စေလွှတ်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေတာကြောင့် တစ်ပတ်အတွင်း အပြီးသတ်ဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပရိသတ် အားပေးမှုများတဲ့ ရတနာပုံအသင်း ဟာဆိုရင် ပြည်တွင်းကစားသမားတွေနဲ့ပဲ ယှဉ်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်လို့ ပြည်တွင်းကစားသမားကောင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာဖို့ ရှိပေ မယ့် ထိပ်တန်းအသင်းတွေကို ယှဉ်ကစား နိုင်ဖို့ အခက်အခဲတွေ့ဖို့ ရှိပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အာရှကလပ်အသင်းပြိုင်ပွဲ တွေ ကစားရမယ့် လက်ရှိချန်ပီယံ ရှမ်းယူနိုက်တက်နဲ့ ရန်ကုန်ယူနိုက်အသင်းတို့ပဲ အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ခြေစွမ်းစမ်းသပ်နေ ကြပြီး တခြားကလပ်အသင်းတွေရဲ့အပြောင်း အရွှေ့တွေက မရှိသလောက် နည်းပါးနေပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့် အာဆီယံဒေသက လိဂ်ပြိုင်ပွဲလောကမှာ ထိုင်းနဲ့ မလေးရှားလိဂ်တွေကပဲ ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်လာဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နဲ့ အင်ဒိုနီးရှားလိဂ်တွေက ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှု အတော်အသင့်ရှိပေမယ့် ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးတဲ့ မြန် မာနေရှင်နယ်လိဂ်နဲ့ တခြားလိဂ်တွေကတော့ ရေရှည်ရပ်တည်ဖို့ အခက်အခဲရှိလာနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာကစားသမားတွေအနေနဲ့လည်း လစာနဲ့ တခြားခံစားခွင့် အဆများစွာ သာလွန်တဲ့ ထိုင်းလိဂ်ကိုပဲ ဦးစားပေးပြောင်းရွှေ့ ကစားဖို့ ပစ်မှတ်ထားလာတာကြောင့် ထိုင်း လိဂ်နဲ့ မလေးရှားလိဂ်တို့က အာဆီယံဒေသရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲလို ဖြစ်လာမလား စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ္စမတ် ကာလတွင် အသင်း တစ်သင်းသင်းအနေဖြင့် ရှုံးပွဲနှင့်အတူ ဝမ်းနည်းစရာ အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်??
ထိပ်တန်းဘောလုံး အသင်းများတွင် အဆုတ် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရန် တောင်းဆို
ခေတ်မီ အဆင့်မြင့် ဓာတ်ခွဲခန်း ပါဝင်မည့် FDA မန္တလေးရုံး အဆောက်အအုံသစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဖွင့်လှ?
တွံတေးမြောက်ခြမ်းရှိ ပျက်စီးနေသောအဓိကကုန်ထုတ်လမ်းမကို ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း စတင်ပြုပြင်မည်
လှိုင်သာယာတွင် တည်ဆောက်ဆဲ ကုန်တင် သင်္ဘောပေါ် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား၊ သင်္ဘောကျင်း လုပ်သားတစ်ဦးသေဆ
ချင်းပြည်နယ်တွင် ပထမဆုံး တည်ဆောက်နေသည့် ဆူရ်ဘုန်လေယာဉ်ကွင်း ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေ
ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင်နှင့် KNPP တွေ့ဆုံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းမှ အောက်ပိုင်းအထိ ငြိမ်း?
မြို့နယ်ပေါင်း ၃၁၆ မြို့နယ်တွင် ပြည်သူ့ ဝန်ဆောင်မှုရုံးများ ဖွင့်လှစ်ပြီး ဘတ်ဂျက်များ ခွဲေ??
စပါးသီးနှံမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေး သင်တန်းသားများအဖွဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများကို လက်တွေ့ကွင်းဆင်းလေ့လာ